Maxkamad ku taalla Hindiya oo ku dhawaaqeysa maamulka goob diimeed ay isku hayaan muslimiinta iyo hinduuska. - JNN24
Maxkamad ku taalla Hindiya oo ku dhawaaqeysa maamulka goob diimeed ay isku hayaan muslimiinta iyo hinduuska.
Maxkamadda sare ee dalka Hindiya ayaa maanta lagu wadaa in ay ku dhawaaqdo cidda maamuleysa oob diimeed ku taallla magaalada Ayodhiya oo ay isku hayaan dadka induska ah iyo muslimiinta hindiya.
Maamulka Hindiya ayaa ciidamo ka badan 5000 oo askari geeyay waqooyiga magaalada Ayodhya ka hor inta la sugayo xukunka maxkamada sare ee ku Sabtida ida loo dhiibayo gacan ku heybta goob diimeedf ay ku muransan yihiin dadka Hinduska iyo Muslimiinta.
← Shirkadda Amal oo gargaar Lacageed ugu deeqday Dadka ku waxyeelloobay fatahaadaha Dalka ka dhacay
﻿Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo ka hadlay Xaalada Gobolka Gedo. →